> Resource > iPod > iPod taaban shawladda kaabta: Waraaqda hayaan ee iPod xiriiri 5/4
Sidee baan ka akhrisan kartaa dhammaan xogta aan gurmad xiriiri iPod faylka?
Waxaan leeyahay Lugood gurmad files waayo, iPod xiriiri 4 kombiyuutarka. Hadda waxaan u baahan tahay in ay doortaan oo akhri qodobada ku jira. Ma jiraan jid ha ii sameeyo? Sidee? Fadlan ii sheeg!
Qaar ka mid ah ammaanka si loo yaqaan, Apple u ogolaan in uusan cidna wax loo akhriyo gurmad Lugood faylka. Waxaad u soo celin kara oo kaliya in ay qalab aad, iyo qiimaha waa in aad bixiso siinayo oo dhan xogta haatan qalab aad. Warka wanaagsani waa in aad wali u karin jidka si ay u helaan iPod xiriiri gurmad haddii aad isku sii dayaan.
iPod gurmad xiriiri shawladda for Windows ama Mac
Hel ah shawladda iPod xiriiri gurmad lagu rakibay on your computer, oo aad si fudud u akhriyi kartaa iPod taaban gurmad file. A version Windows ama version Mac ah, waxay ku xiran tahay in aad on. Halkan waa shawladda: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) . Ma aha in wax shaki ah. Labada ka mid ah barnaamijyada shawladda gurmad xiriiri iPod tahay mid aad u wanaagsan oo ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo, iyo Macdan kartaa dhammaan xogta aad iPod taaban gurmad file.
Download gurmad xiriiri iPod ka shawladda hoos ku qoran. Version maxkamad waa ree.
Next, aynu hubi sida loo isticmaalo iPod gurmad xiriiri shawladda Macdan aad gurmad file oo dhan ku jira soo baxay waxaa ka mid ah la version Windows ah. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxba ma ahan. Waxaad weli raaci karo tallaabooyinka hoose si aad qaadaan tallaabooyin la mid ah.
Sida loo isticmaalo iPod gurmad xiriiri shawladda Macdan aad iPod taaban gurmad file
Tallaabada 1. Dooro iPod xiriiri gurmad
Orod barnaamijka kombiyuutarka ka hor wax kale samayn. Markaas oo dhan Lugood gurmad files si toos ah la marsiiyey doonaa oo ku qoran suuqa kala barnaamijka ee hoos ku qoran. Dooro mid ka mid ah si aad u iPod xiriiri 5/4, oo guji Start Scan; si ay u soo saaro.
Tallaabada 2. Waraaqda aad iPod taaban gurmad content
Waxaad u baahan tahay in ay ku qaataan dhowr ilbiriqsi skaanka. Ka dib markii in, aad ku eegaan karo xogta aad ee gurmad ee suuqa hoose oo dhan. Dooro kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer. Hadda aad si guul leh ku dhameysatay soo saarida aad iPod taaban gurmad file.
Fiiro gaar ah: Waxaad kaloo isticmaali kartaa karaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows & Mac)) in ay si toos ah qalab aad iskaan, si aad u hesho xog ku saabsan qalabka iyo kuwa tirtiray dhawaan.
Sidee si ay u gudbiyaan foomka Videos Computer si ay iPod taabashada
Nidaameed iPod / iPhone / iPad la Your Home Office iyo Computer